हाेसियार ! सुत्नु अघि बिर्सेर पनि गर्दै नगर्नुहोस यी कामहरू - ज्ञानविज्ञान
हाम्रो शरिर स्वस्थ राख्नको लागि स्वस्थ खानपान र व्यायाम मात्रै होइन आरामको पनि महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । चिकित्सकहरुका अनुसार हामीले दैनिक कम्तीमा ७ देखी ८ घन्टा राम्रोसँग सुत्नु पर्छ दिनभरीको काम र ब्यस्त जिवनीले गर्दा बेलुका हाम्रो शरिर निक्कै थाकेको हुन्छ ।
तर पनि राती बिच्छ्यौनामा पल्टिँदा धेरै जसो मानिसलाई सजिलै निन्द्रा लाग्दैन । यस्तो हुनुमा हाम्रो अव्यवस्थित जिवनशैली जिम्मेवार छ । यदि तपाई राम्रोसँग सुत्न चाहानुहुन्छ भने राती सुत्नुअघि कहिल्यै नगर्नुहोस यी ८ काम
१. सुत्नु अघि व्यायाम
२. टिभी हेर्ने वा वेव सर्फ गर्ने
३. तातो पानीले नुहाउने
४. धेरै तरल पदार्थ पिउने
५. राती अबेरसम्म काम
तपाईको जति नै महत्वपूर्ण काम भएपनि राती गर्नु भन्दा बिहानै उठेर गर्दा राम्रो हुन्छ । किनभने सुत्नुअघि काममा ध्यान केन्द्रित गर्दा तपाईको दिमाग उत्तेजित हुन्छ र तनाव उत्पन्न हुन्छ जसले राम्रो सँग निदाउन दिँदैन् ।
६. मनोरञ्जनात्मक कथाहरु पढ्ने
यदी तपाँई एकदमै चाखलाग्दो उपन्यास पढिरहनुभएको छ भने तपाईलाई अझै एक पाना एक पाना भन्दै पढ्न मन लाग्छ जसले तपाईको निन्द्रा नै हराँउछ । त्यसैले सुत्नुअघि कहिल्यै पनि मनोरञ्जनात्मक कथाहरु नपढ्नुहोस ।
७. पाल्तु जनावरलाई सँगै सुताउने
आफ्नो पाल्तु जनावरलाई छातिमा राखेर सुत्नाले वा सँगै सुताउनाले पनि तपाईको निन्द्रा खराब गर्न सन्छ । त्यसैले आफ्नो पाल्तु जनावरलाई सँगै नसुताउनुहोस
८. गम्भिर कुराकानी गर्ने
कुनै गम्भिर कुराकानी वा झगडा गरेर सुत्नुभयो भने तपाईको दिमागमा धेरै कुरा खेल्छ र निन्द्रा लाग्दैन । त्यसैले राती सुत्न अघि कहिल्यै पनि गम्भिर कुराकानी वा झगडा नगर्नुहोस ।
बाँयातर्फ फर्केर सुत्नुका यी फाइदा
एउटा भनाइ छ ‘राती चाडै सुत्नुहाेस् बिहान चाडै उठ्नुहाेस्’ तर आजभाेलीकाे व्यस्त जीवनशैलीले गर्दा हाम्राे सुत्ने र उठ्ने समय फरक छ । बिहान छिटाे उठेपनि राती अबेरसम्म बस्ने गर्छाै जसका कारण डिप्रेसन,उच्च रक्तचाप, ताैल बढ्नेजस्ता थुप्रै समस्या देखिन्छन् ।
समयमा नै सुत्ने उठ्ने मान्छेका लागि पनि सुता इ नमिल्दा स्वास्थ्यमा विभिन्न असरहरू देखा पर्न सक्छन ।
दायाँ तर्फ फर्केर सुत्दा पाचन सम्बन्धि समस्या हुन्छ, बाँया तर्फ फर्केर सुत्दा पाचन समस्या आउदैन ।
गर्भअवस्थामा अधिकांश महिलाहरूलाइ ढाडकाे समस्या हुने गर्छ । यस्ताे समस्याबाट पिडपत महिलाहरूलाइ चिकित्सकहरू बाँया तर्फ फर्केर सुत्ने सल्लाह दिन्छन् ।
बाँयातर्फ फर्केर सुत्दा घुर्ने समस्या पनि कम हुन्छ त्यसैले धेरै घुर्ने समस्या छ भने बाँयातर्फ फर्केर सुत्नुहाेस् ।
हामी दाँयातर्फ फर्केर सुत्दा हाम्राे मुटुमा सबैभन्दा बढी असर हुन्छ । बाँयातर्फ सिरानी गरेर सुत्दा मुटु सजिलै चल्छ ।
यसैले सुताइले पनि तपाइकाे स्वास्थ्यमा असर पुग्ने हुनाले एकदमै ख्याल गरेर सुत्नुहाेस् । सुत्दा सकेसम्म बाँया नै फर्केर सुत्नुहाेस यसले गर्दा तपाइकाे कतिपय स्वास्थ्य समस्या कम हुन्छ ।
यस्ता छन्, सुत्नुअघि चिसाे पानीले नुहाउँदाका फाइदा
नुहाउँदा शरीरको तापक्रम सामान्य हुन्छ । जसले तपाईंलाई गहिरो निद्रा आउँछ । धेरै अध्ययनमा बताइएको छ कि सुत्नुभन्दा ९० मिनेट पहिले नुहाउँदा शरीरको ता पक्रम सामान्य हुन्छ र गहिरो निद्रा आउँछ ।
यसका साथै सावर लिँदा दिमागका कर्टिसोल नामक स्ट्रेस हर्मनको स्तर कम हुन्छ । र, मानसिक स्वास्थ्य सुध्रिन्छ।
छाला चम्किलो हुन्छ
रातमा शरीरले छालाको कोशिका आफैं स्वस्थ बनाउँछ । मृत कोषिका हटाएर नयाँ कोशिका उत्पादन गर्ने काम पनि शरीरले राति नै गर्छ ।
यसले राति नुहाउनुलाई फाइदाजनक ठान्छन् । राति नुहाउनुभयो भने शरीरलाई यस प्रक्रियामा सहजता मिल्छ।
एलर्जी र खटिराबाट मुक्ति
रातको समय नुहाउँदा दिनभरको धुलोमाटो र मैले सफा हुन्छ । दिनभरिको फोहर लिएर सुत्दा तपाईंको निद्रामा समस्या आउन सक्छ । यसैगरी छालासँग सम्बन्धित एलर्जी पनि हुन सक्छ । त्यसैले राति सुत्नुअघि नुहाउनु राम्रो हुन्छ।
नुहाउनु भन्दा पनि जरुरी त सुत्नुअघि अनुहार धुनु हुन्छ । किनभने यस्तो गर्ने गरिएन भने दिनभरिको फोहरका कारण अनुहारमा खटिरा आउन सक्छन्।
राती सुत्नुअघि मोजाभित्र प्याज राखेर सुत्नुका यस्ता फाइदा
राती सुत्नुअघि मोजामा प्याज राखेर सुत्दा विभिन्न फाइदा हुने विभिन्न वैज्ञानिक आधार छन् । राती सुत्नुअघि मोजाभित्र प्याज राख्दा यसको पोषक तत्व तपाईंको छालाले सोस्ने गर्दछ जसका कारण स्वास्थ्यलाई विभिन्न फाइदा पुग्ने गर्दछ ।
वास्तवमा तपाईंको पैतालामा यस्ता विभिन्न कोसिका हुन्छन् जुन शरिरको विभिन्न कोसिकासँग सम्बन्धित हुन्छ । यो चीनियाँ चिकित्सामा शिरबिन्दुको रुपमा मानिन्छ अर्थात् शरिरको एउटा यस्तो हिस्सा जो शरिर भित्रको प्रत्येक अंगको बाटो हो ।
के हो वैज्ञानिक आधार
पैतालामा विभिन्न प्रकारको नशाको अन्त्य हुन्छ (लगभग ७ हजार) जुन शरिरको विभिन्न अंगसँग जोडिएको हुन्छ । यसले शरिरभित्र एक शक्तिशाली बिजुलीको सर्किटजस्तो काम गर्दछ तर जुत्ता चप्पल लगाएका कारण यो निष्क्रिय हुन्छ । त्यसै कारण हामीले केही घण्टाका लागि नाङ्गो खुट्टा हिँड्नुपर्ने सल्लाह दिइन्छ ।
प्याज (र लसुन) हावा शुद्ध गराउनका लागि परिचित छ र छालामा यसलाई लगाउँदा किटाणु र जीवाणुलाई नष्ट गर्न सहयोग गर्दछ । यसका साथै प्याजमा पाइने फस्फोरिक नामक एसिड रगतमा प्रवेश गरेर शुद्ध बनाउन मद्दत गर्दछ । तर ध्यान राख्नुहोस्, एकपटक प्रयोग गरिसकेको प्याजलाई पुनः प्रयोग नगर्नुहोस् ।
बिहान ढिलासम्म सुत्नुका साइड इफेक्ट
धेरै सुत्नु स्वास्थकोलागि हानिकारक हो । बिहान अबेर सम्म सुत्नु त झन् राम्रो होइन । मानिसलाई जति अल्क्षि गरेर सुत्यो उति सुत्न मन लाग्छ ।
बिहान ढिलासम्म सुत्नुका साइड इफेक्टबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ
महका अनेक फाइदा छन् । तर, सुत्नुअघि दैनिक महको प्रयोगले मानिसलाई निरोगी रहन सहयोग पुर्‍याउँछ । बेलुकी प्रयोग गर्ने महले शरीरमा मेटाबोलिज्मलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्दछ । सुत्नुअघि दूधमा मह मिसाएर खाँदा यसले स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा पुर्‍याउँछ ।
तपाईंले बटर मिल्क घरमा लिएर राख्दा उपयुक्त हुन्छ । खानसँगै यसको प्रयोगले तपाईंको जीवनलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ । खानासँग रायोको साग खाँदा पनि रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ । बटर मिल्क र रायोको सागले पाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र चुस्त राख्ने काम गर्दछ । तर, बेलुकीको खानासँग भुलेर पनि दहीको प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
कतिपयले बेलुकासमेत मासुको प्रयोग गर्ने गर्छन्, जुन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ । बेलुकीको समय नियमित हरियो तरकारीको प्रयोगले निरोगी रहन मद्दत गर्दछ ।
अचार र सलादका रूपमा पनि हरियो तरकारी वा फलफूल प्रयोग गरेर शरीरलाई निरोगी राख्न सकिन्छ । यसो गर्दा पनि पाचन प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्छ ।
दूध मानव शरीरका लागि स्वस्थकर मानिन्छ । तर, बेलुकीको खानामा दूध पनि सँगै प्रयोग गर्दा यसको प्रभावकारिता थप बढ्ने गर्दछ ।
यसको प्रयोगले शरीरलाई आवश्यक बोसो त प्रदान गर्छ नै, आरामदायी निद्राका लागि पनि ठूलो भूमिका खेल्छ । त्यसैले बेलुकीको समय नियमित दूध प्रयोग गर्दा पनि निरोगी रहनका लागि सहयोग मिल्छ ।
यस्ता छन्, सिरानी लगाएर सुत्नुका बेफाइदा
तपाईं आफ्नो अनुहार र कपालको स्याहार धेरै गर्नुहुन्छ तर सिरानी लगाउँदा तिनलाई धेरै हानि पुग्छ । तर भोलिदेखि नै छोड्नुस् भनेको हैन, बिस्तारै बिस्तारै यो बानीलाई त्याग्दै जानुपर्छ ।
अनि तपाईंलाई गर्दन, काँध वा ढाडको समस्या छ भने तत्कालै सिरानी छोड्नुहुँदैन । त्यसो गर्नुभयो भने राम्रो निद्रा आउन पाउँदैन र तपाईं झर्कोफर्को र तनाव अनुभव गर्नुहुन्छ । चिकित्सकको परामर्शमा बिस्तारै यसलाई छोड्नुस् ।
सिरानी नलगाइकन सुत्दा राम्रो निद्रा लाग्छ अनि टाउको, गर्दन र काँधका नसाहरूलाई आराम पुग्छ । भोलिपल्ट बिहान तपाईं आराम र ताजा अनुभव गर्नुहुन्छ ।
सिरानीमा धूलो, कपाल, रौं र तेलजस्ता कुराहरू हुन्छन् । तपाईंको अनुहार सिरानीको सम्पर्कमा आउँदा त्यसमा भएको फोहोरको कण अनुहारको छिद्रमा पस्छ र बन्द गरिदिन्छ । अनुहार तकियामा रगडिँदा छिट्टै चाउरी पनि पर्छ ।
तपाईंलाई कपाल झर्ने समस्याले सताइरहेको छ भने सिरानीमा सुत्नु एक कारण हुनसक्छ । सिरानीमा कपाल रगडिन्छ र कपाल बीचबाट टुट्न शुरु गर्छ । रगडिएका कारण कपालको आर्द्रता कम हुन्छ र तिनीहरू रुखा हुन्छन् ।
Don't Miss it के तपाईलाई ढाड दुख्ने समस्याले हैरान बनाएको छ ? यस्ता छन उपचार विधि
Up Next यस्ता अवस्थामा खानुहुँदैन सोयाबीन, नखानुहोस् बढाउनेछ समस्या !
के तपाईं ओछ्यानमा बस्दा खाना पनि खानुहुन्छ, त्यसोभए निश्चित रूपमा यो खबर पढ्नुहोस् वा अन्यथा यो घाटा हुनेछ
स्वास्थ्य भनेको रोगहरूको अभाव मात्र होईन । सबैपक्षीय स्वास्थ्यको बारेमा ज्ञान हुनु हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ । स्वास्थ्यको अर्थ फरक…
लामो समय देखि बाथ रोगले सताहिरहेको छ ? यस्ता छन् यसका लक्षण र उपचार जान्नुहोस्
बाथ रोग भन्नाले शरीरको रोग निरोधक शक्तिले आफ्नै शरीरको अंगलाई असर गरेर हुने रोग भन्ने बुझिन्छ। बाथ रोग धेरै प्रकारका…
नुहाएपछि छाला फुस्रो हुने समस्याबाट हैरान हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस्
तपाइहरूलाई आँफ्नो स्किनलाई कसरी केयर गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता बढी रहेको हुनसक्छ । तपाँईलाई त्यस्तो चिन्ता लागेको छ भने अब…
अनुहारमा दाग आएर हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी उपाय
यदि तपाइँको अनुहारमा वर्षौदेखि रहिरहेको दाग हटाउन चाहनुहुन्छ भने अण्डा र महको फेसप्याक बनाएर अनुहारमा लगाउनुभयो भने त्यसले पुरै अनुहारको…
खरबुजा खाँदा कस्ता फाइदा हुन्छन् र यो कुन रोग लागेका व्यक्तिले खानु हुँदैन, जानिराखाैँ
खरबुजा कुकर्बिटासिया वर्गमा पर्ने लहरे तथा फूल फुल्ने बिरुवा हो । खरबुजामा फस्पोरस, पोटासियम, म्याग्नेसियम, सोडियम, क्याल्सियम, आईरन, भिटामिन बि…
बेसार खानु हुन्छ नि ? यसरी खाए अनगिन्ती फाइदा छन्, थाहा पाउँनुहोस्
शरीरका हरेक अंगलाई फाइदा पुर्‍याउने स्वास्थ्यवद्र्धक जडिबुटी हो बेसार । यसका फाइदा अनगिन्ती छन् । खासगरी तरकारीमा मसलाको रुपमा प्रयोग…
मानिसहरुलाई दुध हालेको चिया पिउन खुब मनपर्ने गर्दछ । तर दुध चिया पिउदा ग्यास्ट्रिकको समस्याले सताउने गर्दछ, त्यसैले कालो चिया…
10 months ago Pradeep Karki
अंग्रेजी भाषा छिटो र सजिलो कसरी सिक्ने ? जानीराखौ
अंग्रेजी एउटा सामान्य भाषा हो । तर यो आफ्नो मातृभाषा नहुनु र यो अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हुनुले हामीले यस भाषा सिक्नुलाई…
प्राय मानिसले पटक पटक खाना खाएपनि छिनछिनमा भोक लागिरहेको हुन्छ । हामिले पेटको भोक निको पार्नलाई हलुका भोजन खानु पर्ने…